အဆိုပါမီးရထားဘူတာရုံအပြင်ဘက်အပေါ်တစ်ဦးသည်ခေတ်သစ်ဖန်အဆောက်အဦးဖြစ်ပါတယ်. ဒါကြောင့်, သငျသညျအထဲမှာ step တစ်ချိန်က, သငျသညျအလငျးကိုမွငျပါလိမ့်မယ်, လေကောင်းလေသန့်အာကာသ, ဒိုးအတွင်းဘူတာရုံ၏သမိုင်းကြောင်းအလှအပနှင့်. ဤသည်မီးရထားဘူတာရုံသမိုင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်. ဒါဟာအတွင်းဖွင့်လှစ်ထားခဲ့သည် 1846 နှင့်ပြန်လည်တည်ဆောက် 1883. သင်မြင်မည်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ rounded ဖန်ဒြပ်စင်အတွက်ထည့်သွင်းခဲ့သည် 2007 အဆိုပါအထင်ကရဘူတာရုံကာကွယ်ပေးရန်.
အဆိုပါစကားလုံးရန်းပင်ကိုဖော်ပြရန်စတင်မထားဘူး Antwerp ဗဟိုမီးရထားဘူတာရုံ. neo-baroque အံ့သြဖွယ်သည်ပိုတူပုံရသည် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ခရီးသွားစင်တာထက်. အဆိုပါရထားဘူတာလည်းစကျင်ကျောက်နှင့်ကျောက်နဲ့လုပ်ထားတဲ့တစ်ကျယ်ဝန်းစောင့်ဆိုင်းအခန်းထဲမှာတပ်ဆင်ထား, နာရီကြီးတစ်ခုပါ ၀ င်သည်, ကြီးမားသောအမိုးခုံးတစ်ခုနှင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်.
လူအတော်များများစဉ်းစားပါ Antwerp မီးရထားဘူတာသည်သူတို့အားလုံး၏အလှဆုံးမီးရထားဘူတာဖြစ်သည်.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feuropes-most-beautiful-railway-stations%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)